Queen's University - Fianarana any Kanada. Fampianarana an-tany hafa Magazine
Queen ny University
Ny University Queen Details
fanafohezan-teny : Qu
Créé : 1841
Aza adino ny miresaka momba ny Queen University
Misoratra anarana ao amin'ny Queen ny University
Ny University Queen hanosika ny fetran'ny inona no ho tratra, ary hanana hevitra izay afaka mitondra fiovana eo amin'izao tontolo izao.
Mahery 170 taona, ny fiaraha-monina efa mihoatra noho ny famoriam-bola ny mazava saina - Queen ny Nahasarika olona miaraka amin'ny fanahy fatra-paniry laza. Isika sary an-tsaina ny zavatra mety ho ny hoavy, ary miara-miasa mba mahatsapa izany.
Ny Queen no misy ao an-tanànan'i Kingston, Ontario, Kanada, antsasa-dalana eo Montreal sy Toronto, roa lehibe indrindra any Kanada tanàna. Kingston no misy eo amin'ny amoron'ny Farihin'i Ontario, akaikin'ny fidirana ny St. Lawrence Seaway, Nosy arivo sy ny Rideau Canal.
Ny fomba tsara indrindra mba hahazoana ny mahalala Queen ny dia amin'ny alalan'ny avy hitsidika. Hitety ny trano manan-tantara, manatrika hetsika ara-kolotsaina, ary mandany fotoana amin'ny kaja tranombakoka, tahiry, ary ny lalan-tsarany.
Ny University Queen dia fiaraha-monina, 170+ taona ny fomban-drazana, akademika tsara, fikarohana, ary tsara tarehy fonenan'ny mpianatra drano vita amin'ny vatosokay trano sy ankehitriny trano. Fa mihoatra noho ny zavatra Queen ny dia ny olona.
Isika mpikaroka, manam-pahaizana, mpanakanto, mpampianatra sy ny mpianatra miaraka amin'ny fanahy fatra-paniry laza, izay te-hanana hevitra izay afaka mitondra fiovana eo amin'izao tontolo izao. Sary an-tsaina ny olona izay miara-izay mety ho ny hoavy sy miara-miasa mba mahatsapa izany.
Queen Ny Kanada dia iray amin'ireo mari-pahaizana ny tranainy indrindra-fanomezana andrim-panjakana, ary efa fiantraikany Kanadiana fampianarana ambony satria 1841 rehefa izany dia naorina ny Royal Satan'ny ny Mpanjakavavy Victoria.
Any in Kingston, Ontario, Kanada, dia tapaky ny salantsalany anjerimanontolo maromaro mandingana, oniversite sy ny matihanina sekoly, ary koa ny Bader Centre Fianarana Iraisam-pirenena miorina any Herstmonceux, East Sussex, fanjakana mitambatra.
Ny mizana Queen undergraduate tsara amin'ny fampianarana amin'ny tsara orina sy mitondra zava-baovao fandaharana nahazo diplaoma, rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fianarana mavitrika.
Queen ny dia manontolo karazany, fikarohana be tokoa oniversite izay mitondra mankany-tsisin'ny fikarohana ao amin'ny isan-karazany ny faritra, ao anatin'izany ny:
kajy amin'ny solosaina, siansa sy ny injeniera
fototra sy pitsaboana biomedical siansa
salama tontolo iainana sy angovo maharitra ny rafitra
olana ara-tsosialy toy ny fanaraha-maso, fahantrana sy ny fampijaliana
Ny fonenan'ny mpianatra tafiditra tanteraka manana tambajotra enina trano famakiam-boky, ary dia an-trano ny tranom-bakoka sy ny maro niavaka-kanto trano, anisan'izany ny Agnes Etherington Art Center sy ny Isabel Bader Center ho an'ny Nanao Arts.
A Community Campus Tontolo_iainana
95% ny mpianatra avy amin'ny mponina any ivelan'i Kingston
85% ny mpianatra miaina ao anatin'ny 15 minitra mandeha ny fonenan'ny mpianatra
mihoatra ny 90% ny voalohany taona mpianatra mipetraka ao amin'ny toeram-ponenany (-ponenana no guaranteedfor-taona voalohany; trano fonenana vaovao roa no hanokatra Fahalavoana 2015!)
Queen ny dia an-trano ny mpianatra avy amin'ny mahery 109 samy hafa firenena
International / visa ho mpianatra mahaforona eo ho eo 8.3% ny manontolo andro mpianatra mponina.
Faculty ny Zavakanto sy ny Siansa
Ao amin'ny Faculty ny Zavakanto sy ny Siansa, miavaka mpianatra hianatra handinika sy hieritreritra manakiana, mampita sy adihevitra, ny heviny ka tsarao tsy miankina – fahaiza-manao izay nitady rehefa avy nahazo diplaoma teny fandaharana, matihanina sekoly, sy ny mpampiasa!
Art Tantara sy ny Conservation
Dan Sekolin'ny Tantara an-tsehatra and Music
Film sy ny Media
Fine Art (maso Art)
Jeografia sy ny Planning
Geological Sciences sy Geological Engineering
Kinesiology sy ny Fahasalamana Fampianarana
fiteny, Ny Haisoratra sy kolontsaina
Fiainana Sciences sy mpikaroka: fiainana Sciences | mpikaroka
Fizìka, Engineering Physics sy ny Astronomia
Ny Faculty ny Fampianarana dia manangana mandroso, etika, mahefa, ary voahevitra mpitarika ao amin'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fampianarana, fikarohana, ary matihanina fiaraha-miasa.
Faculty of Engineering sy Applied Science
Queen ny injeniera dia mirehareha ny amin'izay maharitra fomban-drazana ny zava-bitany, na amin'ny fianarana sy amin'ny fikatsahana zavatra ankoatra ny fianarana, dia manana fiantraikany eo amin'ny tontolo manodidina azy ireo. Ao anatin'ny tontolo misy fiaraha-miasa, tsy fifaninanana, lafiny roa izao mifantoka nanampy ho Queen ny Faculty of Engineering sy Applied siansa mpitarika iraisam-pirenena eo amin'ny fanabeazana injeniera. Rehetra niditra injeniera maka mpianatra taona voalohany iombonana, izay mampiharihary ho any amin'ny isan-karazany ny injeniera feno fitsipika.
Mechanical ary Fitaovana Engineering
Ny Faculty Fahasalamana Sciences (mahafaoka ny sekoly of Medicine, Nursing, ary Fanarenana Therapy) mihoatra noho ny fahalalana rehetra manerana ny fe-potoana iasany ho an'ny fanabeazana, karakara ara-pahasalamana, sy ny fikarohana. Strong fiaraha-miasa manerana sekoly, fahaizanareo, sy ny mpiara-miombon'antoka andrim-panjakana dia ny mampiavaka ny Queen ny fianarana siansa foibe ara-pahasalamana.
Allergy sy ny fitandremam
Fanatoranana ary Perioperative Fanafody
Biomedical sy ny molekiolan'ny Siansa
Cardiac, Ra sy ny taovam-pisefoana (CCR) Program
fizahana aretina Radiology
Endocrinology sy ny Metabolism
General anaty Medicine
Hematology, Oncology, Palliative Care, ary Bioethics
Fiainana Sciences Program
Fiterahana sy ny aretim-behivavy
momba ny taolana
Fitsaboana aretina sy ny molekiolan'ny
Fitsaboana ara-batana sy ny Fanarenana
Ara-batana Therapy Clinic
Public Health Sciences (taloha sy ny Community Health Epidemiology)
Taovam-pisefoana sy Critical Care Fanafody
Miaraka amin'ny fomban-drazana ny fiaraha-monina mirehareha, collegiality, sy ny fanompoana, Queen ny Faculty-dalàna dia manangana miavaka ara-dalàna eran-matihanina amin'ny fomba fijery sy ny fahatakarana mandroso sy ny fampandrosoana ny lalàna amin'ny alalan'ny nanokan-tena, fampianarana sy ny vatsim-pianarana vaovao.
Ny Smith School of Business ao amin'ny Queen ny University, iray amin'ireo raharaham-barotra eran-tany Praiminisitra sekoly, efa nahazo fankatoavana iraisam-pirenena ny amin'ny alalan'ny miavaka ny sampam-pianarana sy ny zava-baovao ny raharaham-barotra fomba fanabeazana. Ny Sekoly miavaka dia manangana mpitarika amin'ny fomba fijery manerantany sy mamorona fahalalana vaovao izay raharaham-barotra sy ny fiaraha-monina mandroso.
Ny Fianarana Graduate School ny tolotra 120 ao anatin'ny fandaharana nahazo diplaoma diplaoma 50+ departemanta sy ny foibe fikarohana mba handinika. Amin'ny alalan'ny ny University Queen Graduate School of Fianarana, mpianatra, mametraka ny heviny amin'ny mihetsika ary mamorona ny fiantraikany eo amin'ny tontolo.
Sekolin'ny Policy Studies
Ny Sekoly Fianarana ny Politika no mpitarika foibe ho an'ny fianarana ambony, fikarohana, adihevitra sy fifaneraserana amin'ny ny tsy akademika izao tontolo izao teo amin'ny sehatry ny politika sy ny fitantanana bahoaka.
Queen ny dia vokatry ny outgrowth ny fampianarana hetsika nomanina ny Presbiteriana ao amin'ny 1830s. Ny volavolan-drafitra ho an'ny oniversite dia naseho nandritra ny fivoriana tany Kingston synoda in 1839, amin'ny farany volavolan-dalàna nampidirina ny alalan 'ny faha-13 Parlemantan'ny Haute Kanada nandritra ny fivoriana in 1840. On 16 Oktobra 1841, ny mpanjaka Sata navoaka tamin'ny alalan'ny Mpanjakavavy Victoria. Queen ny vokatry ny taona maro ny ezaka amin'ny Presbiteriana ny Haute Kanada mba nahita ny oniversite ho an'ny fanabeazana ny mpanao fanompoam-pivavahana ao an-mitombo zanatany sy ny hampianatra ny tanora sampana isan-karazany sy ny boky aman-gazety ny siansa. Izy ireo, rehefa hita taratra amin'ny oniversite amin'ny Oniversiten'i Edinburgh sy ny Oniversiten'i Glasgow. Classes nanomboka tamin'ny 7 March 1842, tao amin'ny hazo kely-endriny trano teo an-tsisin'ny tanàna roa sy ny mpampianatra 15 mpianatra.
Nifindra ny kolejy nandritra ny fotoana maro iraika ambin'ny folo taona voalohany, alohan'ny fandaminana amin'ny toerana ankehitriny. Talohan'ny Canadian Confederation, ny kolejy dia vola tohanan'ny Fiangonana Presbyterianina tany Ekosy, ny governemanta Kanadiana sy ny olom-pirenena tsy miankina. Rehefa avy niatrika Confederation ny oniversite faharavana, rehefa niala ny governemanta federaly ny famatsiam-bola sy ny Commercial Bank ny Midland nirodana District, ny loza izay vidin'ny Queen ny roa ampahatelon'ny ny fanafiana masina. Ny kolejy dia voavonjy rehefa avy Principal William Snodgrass sy ny manam-pahefana hafa namorona fanangonam-bola fampielezan-kevitra manerana an'i Kanada.
Ny faharavana ara-bola mety mbola hiasa saina ny fitondrana mandra-folo taona farany tamin'ny taonjato. Nazoto nandinika izy ireo nandao Kingston sy Nampitambatra amin'ny University of Toronto ho tara tahaka ny 1880s. Ny vola fanampiny bequeathed avy amin'ny Queen lehibe voalohany mpanao soa, Robert Sutherland, ny oniversite eny staved tsy fahombiazana ary ara-bola foana ny fahaleovantenany. Queen ny oniversite nomena sata amin'ny 17 Mey 1881. In 1883, Vehivavy Medical College naorina tany Queen ny amin'ny kilasy telo. Theological Hall, vita tamin'ny 1880, nanompo tany am-boalohany ho toy ny tena Queen trano nandritra ny faramparan'ny taonjato faha-19.
In 1912, Queen ny tafasaraka amin'ny Fiangonana Presbyterianina ny Ekosy ary nanova ny anarany ho Queen ny University tao Kingston. Queen ny Theological College dia nitoetra teo amin'ny fanaraha-maso ny Fiangonana Presbyterianina any Kanada, mandra- 1925, rehefa niditra ny United Fiangonan'i Kanada, toerana amin'izao fotoana izao dia mbola. Ny oniversite iray hafa Niatrika olana ara-bola nandritra ny Ady Lehibe I, avy maranitra indray mitete amin'ny fisoratana anarana noho ny miaramila mikarakara ny fiantsoana miaramila ny mpianatra, mpiasa, ary ny sekoly ambony. A $1,000,000 fanangonam-bola fiara sy ny niresaka fampitsaharana in 1918 Namonjy ny oniversite. eo ho eo 1,500 mpianatra nandray anjara tamin'ny ady sy ny 187 maty. Volana teo anatrehan'i Kanada niaraka tamin'ny Ady Lehibe II, US Filoha Franklin D. Roosevelt, tonga tany Queen ny hanaiky-boninahitra sy ny ambaratonga, amin'ny fampitana re manerana izao tontolo izao, naneho ny Amerikana fifanarahana politika ny fifanampiana sy ny namany Kanada. Nandritra ny Ady Lehibe II, 2,917 nahazo diplaoma avy amin'ny Queen ny nanompo tao amin'ny tafika mitam-piadiana, mijaly 164 namoizana aina. Ny Fahatsiarovana Room in Memorial Hall ao amin'ny John Deutsch University Queen Center lisitra ireo ny mpianatra izay namoy ny ainy nandritra ny ady lehibe.
Queen ny nitombo haingana rehefa vita ny ady, nalaza ny fanitarana taorian'ny ady toe-karena sy ny isan'ny mponina boom izay Nahatratra ny fara tampony tamin'ny taona 1960. From 1951 ny 1961, nitombo avy fisoratana anarana fotsiny ny 2,000 mpianatra ho mihoatra noho ny 3,000. Ny oniversite nanomboka tamin'ny trano iray fandaharana, fanorenana trano fonenana mpianatra dimy ao amin'ny latsaky ny folo taona.
Taorian'ny fanovana ny fanabeazana ara-dalàna any Ontario tamin'ny taona 1950 teo antenatenan'ireo taona, Queen ny Faculty ny Lalàna nisokatra tany 1957 ao amin'ny vao naorina John A. Macdonald Hall. Tetikasa fanorenana hafa ao amin'ny Queen ny tao ny taona 1950 anisan'izany ny fanorenana ny Richardson Hall-trano Queen ny biraom-panjakana, ary Dunning Hall. Tamin'ny faran'ny taona 1960, toy ny maro hafa anjerimanontolo any Kanada, Queen ny avo telo heny ny fisoratana anarana, ary tena nitarina ny sampam-pianarana, mpiasa, ary ny fotodrafitrasa, noho ny amin'ny zaza sy ny malala-tanana boom fanohanana avy amin'ny sehatra-bahoaka. Ny tapaky ny taona 1970, ny isan'ny mpianatra manontolo andro efa tonga 10,000. Anisan'ireo trano vaovao telo sy trano fonenana hafa misaraka trano ho an'ny departemanta ny Matematika, Fizìka, Haiaina sy ny Psychology, Siansa Sosialy sy ny Humanities.
Nandritra izany fotoana izany sekoly Music, Public Administration (lasa anisan'ny Policy Studies), fanarenana Therapy, ary Urban sy Planning paritra dia naorina tao Queen ny. Ny fametrahana ny Faculty of Education in 1968 an-tanety momba ny kilaometatra andrefan'ny ny oniversite ny oniversite notokanana ny andrefana fonenan'ny mpianatra.
Queen ny Nankalaza ny sesquicentennial taona in 1991, ary nitsidika ny Charles, Prince of Wales, sy ny vadiny avy eo-, Diana, mba hanamarihana izany fotoana izany. Ny Prince of Wales nanolotra Mitovy tanteraka aminao ny 1841 Royal Charter omena amin'ny alalan'ny Mpanjakavavy Victoria, izay nampandry ny ny oniversite; ny Mitovy tanteraka aminao dia naseho ao amin'ny John Deutsch University Center. Ny vehivavy voalohany Chancelier ny Queen ny University, Agnes Richardson Benidikson, dia napetraka tamin'ny 23 Oktobra 1980. In 1993, Queen ny nahazo Herstmonceux Castle ho toy ny fanomezana avy alumnus Alfred Bader. Ny lapa dia ampiasaina amin'ny anjerimanontolo toy ny Bader Study International Center.
In 2001 ny Antenimieran-doholona fahitsiana Komitin'ny Fanabeazana (SEEC) nianatra ny tantaran'ireo vitsy an'isa sy ny hita maso Aborigène mpikambana ao amin'ny Queen sekoly ambony ny taorian'ny mpampianatra vehivavy mainty hoditra sisa, nanambara hoe efa niaina fanavakavaham-bolonkoditra. Taorian'ny fanadihadiana ity SEEC naniraka ny fanadihadiana izay hita fa maro no nahalala ny 'Culture ny hafotsiany’ tany amin'ny oniversite. Ny tatitra am-pamaranana fa "fotsy tombontsoa sy ny hery mbola ho hita taratra eo amin'ny Eurocentriccurricula, fomba nentim-paharazana pedagojika, fanaramàna, fampiroboroboana sy ny fotoam fanao, ary fahafahana ho an'ny fikarohana "ao amin'ny Mpanjakavavy ny. Ny valintenin'ny oniversite ny tatitra dia ny momba ny adihevitra mitohy. Ny fitantanan-draharaha fepetra ampiharina mba hampiroboroboana ny fahasamihafana manomboka amin'ny 2006, toy ny toerana ny fahasamihafana mpanolotsaina sy ny fanaramàna ny “fifanakalozan-kevitra mpanaramaso” mba hanamora ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny rariny ara-tsosialy.
Amin'ny Mey 2010, Ny University Queen nanatevin-daharana ny Matariki Network ny Anjerimanontolo, vondrona iraisam-pirenena ny anjerimanontolo noforonina ao amin'ny 2010, izay mifantoka amin'ny rohy mafy eo amin'ny fikarohana sy ny fampianarana undergraduate.
Ianao ve mila miresaka momba ny Queen University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Queen ny University ao amin'ny Map
Photos: Queen ny University ofisialy Facebook
Ny University Queen Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Queen ny University.